Verizon Mere nke Ọma Taa! AT&T Ọ Dịchaghị Mma ... | Martech Zone
Verizon Mere nke Ọma Taa! AT&T Adịghị Mma…
Wednesday, September 19, 2007 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Oge ụfọdụ m na - eji blọgụ m dị ka ikpo okwu na-amaja mgbe a bịara n'ihe gbasara ndị ahịa. Ọ bụghị ihe ihere imenye ụlọ ọrụ ahụ dịka ọ bụ igosipụta iwe m. Na ederede gara aga, M sụchie AT&T ma kọwaa ikike adịghị ike ha mezue otu ihe na usoro ọrụ na-aga. Taa ha nyere onyinye ha - gbanwee ụgwọ ọ bụla ha tinyere na mberede wee kụọ $ 500 ụgwọ ụgwọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị. Enweghị m obi ụtọ na mkpebi - anyị furu efu ọtụtụ puku dollar na arụpụtaghị na aha ọma banyere azụmahịa ahụ. Otú ọ dị, ha kwere nkwa, anyị aghaghị ịga n'ihu.
Verizon; n'aka nke ọzọ, karịrị ihe niile m tụrụ anya ya. M natara ụgwọ $ 400 + ekwentị. Chei! Mgbe emechara 30 nkeji online na-agbalị iji chọpụta ihe Heck m elu, anya-elu, na-akọrọ, wdg nkeji bụ na otú onye ọ bụla nke 3 nọmba ekwentị ndị kpatara ihe… M nyere. Akwụpụrụ m ozi email na Verizon na-arịọ maka nkọwa.
Okwu a doro m anya na m nọ na atụmatụ ezighi ezi mgbe m tinye ekwentị maka nwa m nwanyị. Onye ahụ dere m azụ, Renae, dere nkọwa zuru ezu banyere ebubo niile. Ebe m chọpụtara na m mere mezie atụmatụ m otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, ọ gbakwunyere $ 100 n'aka na akaụntụ m. Daalụ Verizon!
Ekwesịrị m ịgbakwunye na m asị na VZ Navigator enweghị ike ịnweta n'èzí m Verizon na akaụntụ, ma n'ezie ụgbọ ala igodo bụ ikenyeneke mbiet! Ọ dịghị mkpa ịzụta a GPS unit na ngwanrọ a na ekwentị mkpanaaka gị. Enwere m Razr na enwere m ike idobe ekwentị na oche ndị njem wee nụ ntuziaka ahụ n'ụzọ zuru oke.
Kaadị ịde blọgụ m erutela!
Isi ihe dị mkpa iji cheta maka B3B ịde blọgụ